Ibsa ijjannoo uummata keenna cufaaf. #OromoProtests.
Dargaggoo biyya keessaa irraa nuqaqqabe.
Dhumarrattis ibsa ejjennoo armaan gadii kana baasudhaan waltajjii isaa xumureera
1-Akkuma beekkamu mootummaan wayyaanee koodominiyeemii isiniif ijaarudhaan abbaa manaa isin taasisa jechuudhaan uummanni mindaa isaatirraa akka baankii daldala itopiyaatti qusatan gochuun isaa beekkamaadha.haata'umalee uummanni waggaa kudhanii ol eeggachaa kan turee fi hanga ammaatti mana kiraatti rakkachaa jiraachuun beekkamadha. Duubni isaa yoo qoratamu waayyaaneen maallaqa uummata irraa walitti qabde kanaan meeshaa waraanaa bitaa akka ture irra gahameera.kanaaf uummanni Oromoo martinuu kan maallaqni isaa baankii daldala itiyoopiyaatti qusatame yoo jiraate hattamaan gara baankii dhuunfatti qusatu isin beeksisa.Fkn baankiiwwan akka Baankii internaashinaalii Oromiyaa,Baankii internaashinaalii Awaash fi Baankii hojii gamtaa Oromiyaatti qusadhaa. Qabeenyi kee akka baankii daldala itiyoopiyaa wajjiin hin barbadoofne of eeggannoo godhaa!
2-Qonnaan bultoonni Oromiyaa martinuu omisha isaatiin gabaa lagchuu qaba.
3-Qabeenya wayyaanee kan ta'e martinuu Oromiyaa keessa kan socho'u yoo ta'e qeerroon Oromiyaa tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu qaba.
4-Abbootiin qabeenyaa Tigree qonnaan bulaa keenya lafa isaarraa buqqisanii Oromiyaa keessatti invest godhan yoo jiraatan hatattamaan tarkaanfii irratti fudhachuu.
5-Qeerroon kallattii hundaan jiru,bakka jirutti wal ijaaruudhaan,hawaasa keenya tooftaa qabsoo barsiisuudhaan abbaa irree kana ofirraa fonqolchuu
6-Qeerroon Oromiyaa keessatti argaman hundi fayyadamaa Facebookii ta'uudhaan odeeffannoo wayitawaa walii dabarsuu.
7-Ergamoonni tokko tokko hawaasa keenya keessa taa'anii dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqachaa jiran yoo jiraatan duursa tarkaanfii isaanirratti fudhachuu
8-Motummaan wayyaanee humna waraanaa waan nurratti labseef,qabsoon keenya bifa ripheloltummaatiin tarkaanfii irratti fudhachuu
9-Uummanni Oromoo osoo miliyoona 50 ol ta'ee jiruu bara baraan waanjoo gabrummaa jala jiraachuu hin qabu. Kanaaf uummanni Oromoo hanga eenyummaan isaa mirkaanutti,lafti isaa finfinnee fi diredawaan hanga federaala(diina)jalaa baate Oromiyaa jala galtutti,mootummaan abbaa irree kun barbadaa'utti qabsoon uummata Oromoo yoomiyyuu itti fufa.
10-Ijoollee keenya gara jabinaan mana barumsaatti,uummata keenya qe'ee isaatti fixaa kan jiru agaazii Tigree akka ta'an irra gahamee jira.kanaafuu,gochaa amma itti jiran kana hatattamaan hin dhaaban taanan sanyii isaanii Oromiyaa keessa jiran barbadaa'uuf akka jiran hubachuutu isaanirra jira. Sababiin isaas isaaniis duguuggii sanyummaarratti waan xiyyeeffataniifi Duunus hidhamnus doorsifamnus qabsoon eegalle yoomiyyuu galma ni gaha.
ijifannoon uummata Oromoof yaa ta'u!!
Mudee 20, 2015